October 24, 2019 - Myitter
October 24, 2019 Myitter 0
ဆရာကြီးဦးအောင်သင်းရဲ့ အကြိုက်ဆုံးထဲက အကြိုက်ဆုံးစကား… လူနဲ့တိရစ္ဆာန် ဘယ်သူသာလဲမေးရင်???လူကသာတယ်လိုပဲဖြေကြတယ်… စဉ်းစားကြည့်ရအောင်… မြင်းလောက်အပြေးသန်သလား? ဆင်လောက်ခွန်အားကြီးသလား? ငါးလောက်ရေကူးကျွမ်းသလား? ကျီးကန်တို့လဒတို့လောက် မျက်စိလျှင် လား? အယ်ဇေးရှင်းခွေးလောက် အနံ့ခံကောင်းလား? အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဘာနဲ့ ညာနဲ့ စည်းလုံးတယ် ဘာညာနဲ့မပြောနဲ့… ပျားတွေလောက်မစည်းလုံးဘူးနော်… ပျားတွေဟာသိပ်ဝီရိယကောင်းတယ် ပန်းပွင့်မညိုးခင် မနက်စောစော ကတည်းက လုံ့လစိုက်ပြီး […]
ချစ်သူနဲ့ ရွှေလက်တွဲပြီး မင်္ဂလာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တေးသံရှင်ပန်းအိဖြူ
တေးသံရှင် ပန်းအိဖြူကတော့ မြန်မာသံ သီချင်းအေးအေးလေးတွေကို အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ အသံလေးနဲ့သီဆိုတတ်တဲ့ မြန်မာသံ အဆိုရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိသတ်တောင်းဆိုမှုအများဆုံး မြန်မာသံ တေးစီးရိးဆုကိုလည်း ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို သူမရဲ့ရှည်လျားတဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီးနဲ့ နန်းဆန်တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ကြောင့် ပရိသတ်တွေ အချစ်ပိုနေရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ ။ သူမရဲ့ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့ […]
သားသမီးချစ်၍ ရွှေထည်ပစ္စည်း ဝတ်ဆင်သော မိဘများသတိထားကြစေချင်အကြွေးများသည့်အမျိုးသမီးက တစ်ရွာတည်းနေ ၉ နှစ်သမီးကို နားထောင်းချွတ်မပေးသဖြင့် ရိုက်သတ် ပဲခူး အောက်တိုဘာ ၂၄တစ်ရွာတည်းနေ ၉ နှစ်သမီးကို နားတောင်းချွတ်မပေးသည့်အတွက်ကြောင့် ဆိုင်ကယ်ရှော့ဘားဖြင့် ရိုက်သတ်လိုက်သည့် လူသတ်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခု ရွှေကျင်မြို့တွင် ဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေကျင်မြို့နယ်၊ ပဒဲကောကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဖယ်အင်းကျေးရွာတွင် […]
ကြင်ရာတော်ကို ဘွဲ့ပြန်သိမ်းပြီး ထိုင်းဘုရင် နန်းတော်က အရာရှိကြီးတွေကို ရာထူးထပ်ဖြုတ် ထိုင်းဘုရင် ဝချီရာ လောင်ကွန်းဟာ နန်းတော်ကို သစ္စာဖောက်ဖျက်လို့ဆိုပြီး ကြင်ရာတော်ကို ဘွဲ့အဆောင်အယောင်တွေကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက် နန်းတော်က အရာရှိ ခြောက်ယောက်ကို အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ အကျင့်ပျက်လုပ်ရပ်တွေ လုပ်တယ်ဆိုပြီး ရာထူးက ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အခုလို ထုတ်ပယ်ခံရသူတွေထဲမှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၊ […]
လေယာဉ်ဆင်းချိန် ကျောက်ဖြူလေယာဉ်ကွင်းထဲ လူကျွဲနွားဖြတ်သန်းနေ၍ မြန်မာ့လေကြောင်း လေယာဉ်မဆင်းနိုင်ဘဲ ပြန်တက်ခဲ့ရ နီမင်းထွန်း နိရဉ္စရာ၊ အောက်တိုဘာ ၂၄ / ၂ဝ၁၉ မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းပိုင် လေယာဉ်တစ်စင်းသည် အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီခန့်က ကျောက်ဖြူမြို့လေဆိပ်သို့ ဆင်းသက်ရာတွင် လေယာဉ်ကွင်းအတွင်း အန္တရာယ်ရှိသည့်အတွက် မဆင်းနိုင်ဘဲ […]
အလှရေးထားတာမဟုတ်တဲ့ လမ်းလယ်က မျဉ်းတွေအကြောင်း
လမ်းလယ်ကမျဉ်းတွေ အလှရေးထားတာမဟုတ်ဘူးနော်.. မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက် လမ်းအလယ်ကမျဉ်းတွေအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ် အလယ်မျဉ်းပြတ် နှစ်လမ်းမောင်းတွင် မျဉ်းပြတ်ကိုဖြတ်ကျော်၍ ကွေ့နိုင်သည်။ ဂ-ကွေ့လည်း ကွေ့နိုင် သည်။ တစ်လမ်းမောင်းလမ်းတွင်မူမျဉ်းပြတ်ကိုဖြတ်၍ ယာဉ်ကြော ကူးပြောင်းနိုင်သည်။ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းလျှင် မျဉ်းပြတ်ကိုဖြတ်၍ ရှေ့ယာဉ်ကိုကျော်တက်နိုင်သည် မျဉ်းပြတ်များကို ခွ၍မမောင်းရ။ မျဉ်းပြတ်များပေါ်တွင် လမ်းမလျှောက်ရ ၊ ရပ်မနေရ၊ စက်ဘီးမစီးရ။ […]
ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံ သရုပ်ဆောင်ခလေးနဲ့ သားဖြစ်သူကို ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အထိ ထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်သန်းသန်းဆင့်
(Unicodeျဖင့်ဖတ်ရန်) ပရိသတ်ကြီးရေ ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံတွေရဲ့ ဘဝကတော့ ခက်ခက်ကြမ်းတန်းလွန်းတာ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ ကြမ်းတမ်းပါစေ ဝါသနာအရရော ဝမ်းစာ အရပါ အနုပညာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအထဲမှာတော့ ဒေါ်သန်းသန်းဆင့် တစ်ယောက်လဲ အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်သန်းသန်းဆင့်ကတော့ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပိုင်နိူင်စွာ သရုပ်ဆောင်နိူင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်သန်းသန်းဆင့် […]
အခုချိန်မှာဆရာမဒေါ်နီလာအေးအနေနဲ့သတိကြီးကြီးထားဖို့လာပါပြီ ကိုအောင်ကြီးဟာဒီအမူ့ကိုမကျူးလွန် ဘူးလို့ဆရာမရဲ့ ထွက်ဆိုချက်ကိုတဖက်လူတွေက သ‌ဘောကျမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့် သွားသတိ လာသတိစားသတိ သတိကြီးကြီးထားပါမိသားစု မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအနေဖြင့်လည်းအထူးကြတ်မတ် ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မူ့တွေ ပေးဖို့ လိုအပ့်ပါတယ်အမှန်တရားချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအနေဖြင့် အနီးကပ့်စောင့်ရှောက်ကြပါ။ V‌လေးအမူ့ရဲ့အဓိက သက်သေဆရာမ နှင်းနုလွင် ကဟိုလိုလို ဒီလိုလို နဲ့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာမ ဒေါ်နီလာအေးဟာနောက်ထပ့်ရုံးချိန်းတွေမှာ အဓိက အရေးပါတဲ့သက်သေတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဆရာမရဲ့ […]
၂၀၂၀ ချစ်သူများနေ့မှာ သူရိယနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ စီစဉ်ထားပြီးမှ လမ်းခွဲခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်း မျက်ရည်တွေနဲ့ ပြောလာတဲ့ ဆုအိမ့်စံ
မကြာသေးခင်က သူရိယနဲ့ လမ်းခွဲလိုက်တယ်လို့ သတင်းထွက်လာပြီး အခုလို သူရိယဘက်က တဖက်သတ်လမ်းခွဲခံရတဲ့အပေါ် တရားဥပဒေအတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဆုအိမ့်စံက ဒီကိစ္စမှာ သူမအနေနဲ့ လာမယ့် ၂၀၂၀ ချစ်သူများနေ့မှာ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ စီစဉ်ပြီးမှ လမ်းခွဲခံလိုက်ရတာဖြစ်ကြောင်း MC မီဒီယာမှတဆင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဆုအိမ့်စံနဲ့ သူရိယတို့ဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ […]
ညနေ မိုးရွာပြီးစမှာ ဖလပ် ဖလပ်နဲ့ အသံတွေ ကြားလို့ ထွက်ကြည့်လိုက်တာ
ညနေ မိုးရွာပြီးစမှာ ဖလပ် ဖလပ်နဲ့ အသံတွေ ကြားလို့ ထွက်ကြည့်လိုက်သောအခါ…. ဒီညောင်ပင်ကြီးက တော်တော်လေး ထူးဆန်းတယ် ကဆုန်လ ရောက်ပြီဆိုရင် ရွက်နုဝေပြီး ညောင်ကန်တော့ ထိုးတယ်။ မနေ့က ညနေ မိုးရွာပြီးစမှာ ဖလပ် ဖလပ်နဲ့ အသံတွေ ကြားလို့ လမ်းသွားလမ်းလာနဲ့ အနီးအနားအိမ်တွေက ထွက်ကြည့်တော့ […]